Namootni ABO keessatti shira xaxuun beekaman kora sabaa waamna jechuun ummata burjaajjessaa Jiru. – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooNamootni ABO keessatti shira xaxuun beekaman kora sabaa waamna jechuun ummata burjaajjessaa Jiru.
Namootni ABO keessatti shira xaxuun beekaman kora sabaa waamna jechuun ummata burjaajjessaa Jiru.
Namootni ABO keessatti shira xaxuun beekaman kora sabaa waamna jechuun ummata burjaajjessaa akka jiran qaruuxeen Qeerroo Bilisummaa Oromoo bira gahee jira.
Akka Qaruuxeen Qeerroo Bilisummaa Oromoo ragaa waliin qulqulleeffatetti guyyaa sanbata lamaan as deemu jechuun Bitootessa 13-14/2021 ykn bitootessa 4-5/2013 kanatti akkuma waamaa jiraachuu baramee jira. Qaruuxeen Qeerroo Bilisummaa akka mirkaneessatetti Karaan isaan ittiin waamaa jiranis karaalee armaan gadii tahuu bira geenyee jirra.
1. Namoota Gabrummaaf ABO balaaleffatan karaa sirrii godhanii fudhatan,kanneen durumaanuu rakkoo adda addaatiin qabsoorraa of duuba deebi’niifi caasaa mootummaa waliin hojjatan waamaa jiru.
2. Namoota caasaa keessatti beekan odeessa dogoggoraa kennuun akka waan korochi karaa sirrii ta’een beekamtii dhaabaatiin ykn eeyyama Hayyu Dureetiin godhamaa jiruutti fakkeessuudhaan dogongorsuun waamaa jiru.
3. Namootumaa haala dhaabniifii siyaasni biyya kanaa keessa maal keessa akka jiru hin beekneefi jaalala dhaabaa qaban hubannoo sobaa qabsiisuudhaan waamaa jiraachuu isaanii Qaruuxeen Qeerroo Bilisummaa Oromoo mirkaneeffatee jira.
Kana hubachuun ummatni Oromoo miseensonni fi deeggartootni ABO haala kana hubachuun sochii gantootni dhaaba Ummata bal’aa ABO irratti kora Sabaa jechuun afaan faajjiif kora Sobaa waamaa jirtu harkatti akkasuma fashalsiisaa jirtan ammas jabeessitanii akka irratti ummataaf hubannoo kennitan waamicha isiniif goona.
Namoota shira kana irratti qindaayanii hojjetaniif leenjiin Bitootessa 10/2022 Finfinnee Hoteela Aksum keessatti karaa Addisuu Araggaa kan kennamaa ture yoo tahu guyyaa har’as beellamni qabamee jiraachuu qaruuxeen Qeerroo Bilisummaa Oromoo bira gahee jira.
Namoota dirqama kana fudhatanii socho’aa jiran sanada isaanii fi maqaa namoota jira kana irratti hirmaachuuf jiran jedhamanii guuchisiisamaa jiran ragaa waliin ummataaf kan maxxansinu taha yoo shira qindaayaa murna PPn gaggeeffamu irraa harka keessaa hin fudhanne hunda maxxansuuf ni dirqamna .
Namoota kora sobaa shiraan PPn gama gantootaan akka gaggeeffamuuf waamaa jirtuuf Kana irratti hirmaataniif bakkayyuu konkolaataa akka ramadaniifi baajannis waliin akka ramadameefii jiru qaruuxeen Qeerroo Bilisummaa qulqulleeffateera.
Walumaagalatti ABO kora Sabaa ammatti waame kan hin qabnee fi koreen qindeessituu kora Sabaa ABO kan gara fuulduraatti beeksisu tahuu hubattanii kora Sabaa jedhamuun kan waamamaa jiru ABOn kan hin beekne tahuu akka hubattanii wal hubachiistan isiniif dhaamna.
#Hubachiisa Korri Sabaa ABOn waameera jedhamu soba tahuu bartanii gara fuulduraatti kora Sabaa karaa Koree Qindeessituu kora Sabaa ABO karaa miidiyaales tahe karaa caasaalee waamicha isiniif godhamu akka hordoftan isin beeksifna.
Kora Sobaa fi Diiggaa ABO fi KFO
PPn shiraan dhiibdee daandii hundaa ABO fi KFOtti cufuun erga filannoo keessaa baastee amma immoo akka barbaaddetti keessa seenuuf karaa Addisuu Araggaa shira guddaa xaxaa jirti. ABO karaa Qajeelaa Mardaasaa dirqamni maqaa kora sabaa jedhamee akka gaafa Bitootessa 13,2021 qophaa’u, Obbo Wandimmuu Ibsaa immoo KFO keessaa nama ijaaree akka fottoqinsi uumamu jabeeffamee hojjetamaa jira. Namootni kora jedhame irratti waamamtan akkuma kanaan dura fashaleessitan ammas itti beektu. Keessaanis nu quunnamaa warreen jirtanis kanneen nu quunnamuuf barbaaddanis balballi banaa dha.
GMN- Bitootessa 2, 2021 Kora Sabaa ABO Gaggeessina jechuudhaan qaama aangoo fi gaafatama hin qabneen…
Shira filannoo fi ABO irratti mootummaan dalagaa jiru
Shira filannoo fi ABO irratti mootummaan dalagaa jiru Yeroo dhiyoo asitti mootummaan Itoophiyaa kan Dr…
Odeeffannoo Dharaa HD ABO Ilaalchisee Facaafamaa Jiru Irratti Ibsa ABO
Odeeffannoo Dharaa HD ABO Ilaalchisee Facaafamaa Jiru Irratti Ibsa ABO (IBSA ABO, Hagayya 16, 2020)…
OMN: Turtii Obbo Daawud Ibsaa, Hayyu Duree ABO Wajjin
Sudan’s PM in Cairo to discuss Ethiopia’s Nile dam dispute